iOS 6 ye-iPhone | IPhone iindaba
iOS 6 yinkqubo yokusebenza eqaliswe yi-Apple ngo-2012 ukubonelela ngaphezulu kwe- Iimpawu ezintsha ezingama-200 eziqhubela phambili ukuphucula ukubanakho kwezixhobo ze-iOS. Ezinye zezona zibaluleke kakhulu kukudityaniswa kwenethiwekhi yoluntu i-Facebook, ukubanakho kokusebenzisa SIRI ngeSpanish, Incwadi yokundlula okanye uphuculo kwizicelo ezahlukeneyo (Imeyile, iSafari, umnxeba, ixesha lokujongana, ...). Ukufika kwe-iOS 6 kuye kwathetha ukuba Ukuphela kwesicelo seYouTube kunye nokusetyenziswa kweMephu zikaGoogle indawo yayo yenziwe ngu-Apple engakhange ibe iphikisana.
Ityala elitsha ngokuchasene neApple, ngeli xesha lokufaka i-FaceTime kwi-iOS 6 ukusinyanzela ukuba sihlaziye kwi-iOS 7
Ukuba uhlala ufunda iiblogi malunga netekhnoloji, uya kuba uqhelene "nokuphelelwa lixesha", isenzo esisetyenziswa ziinkampani ukwenza ...
Uyibonisa njani i-shutter kwikhamera ye-iPhone kwakhona (tweak)
por UIgnacio Sala yenzayo 6 iminyaka .
Kwiminyaka emininzi i-skeumorphism ye-iOS ihamba nathi kwizixhobo zethu. Emva kokufika kwe-iOS 7, i ...
IVintageSwitcher isibonisa ukwenza imisebenzi emininzi njengakwi-iOS 6
Ukufika kwe-iOS 7, uninzi lwabasebenzisi babemathidala ukuhlaziya i-iOS 6, beshiya isiseko esithandabuzekayo ...
por UIgnacio Sala yenzayo 7 iminyaka .
IOS 8.4 isizisele njengeyona nto iphambili iApple Music, inkonzo yomculo yokusasaza iApple eyi ...
Ukuphela kwenkxaso yeYouTube yezixhobo ezine-iOS 6 kunye neenguqulelo zangaphambili
por Iindaba ze-IPad yenzayo 7 iminyaka .
Kwiiveki ezimbalwa ezidlulileyo iYouTube ibhengeze utshintsho kwi-API eya kuthi ichaphazele izixhobo ezininzi apho sifumana ezisekwe ...
Ngaba unengxaki nexesha lokujongana nobuso? Isisombululo kukuhlaziya inkqubo yakho yokusebenza
Abasebenzisi be-IOS kunye neMac OS X abaneengxaki ngeFaceTime sele benesisombululo esisemthethweni ...
UApple ucacisa ukuba kutheni iFaceTime iyekile ukusebenza kwezinye izixhobo
por UPablo Ortega yenzayo 8 iminyaka .
Ngqo, iApple inyanzela bonke abasebenzisi ukuba bahlaziye iinkqubo zokusebenza. Inkampani ifuna ukwandisa ukwamkelwa kwe-iOS ...
I-p0sixspwn ihlaziywa kwiJailbreak engafakwanga kwi-iOS 6.1.6
por ULuis Padilla yenzayo 8 iminyaka .
Abagculi iH8sn0w kunye neWinocm bahlaziye iphakheji yeCydia, i-p0sixspwn, evumela ukungafunyanwa kwejele kwe-iOS 6.1.6….
I-Apple ikhupha i-iOS 7.0.6 kunye ne-6.1.6 yokulungisa iibhugi
U-Apple usibambe nje singalindelanga ngeenguqulelo ezimbini ezintsha ze-iOS yezixhobo zabo eziphathwayo. iOS 7.0.6 kunye 6.1.6 ...
P0sixspwn, iJailbreak ukuya kwi-iOS 6 yeWindows ekhoyo ngoku.
Kwiintsuku ezininzi emva kokuba i-p0sixspwn ikhutshelwe i-Mac, isicelo esivumela bonke abasebenzisi kwiJailbreak…
Thumela abafowunelwa bakho be-imeyile kwi-iCloud